Ikholeji yase-Saint Elizabeth Iziphakamiso: ISAT izikolo ...
Ikholeji yase-Saint Elizabeth Iziphakamiso ezipheleleyo:
Ikholeji yaseSanta Elizabeth iyisesikolweni esifanelekileyo, njengoko ama-66% wabenzi bezicelo zamkelwa ngo-2016. Abafundi abanamabanga amabakala kunye namaqondo angamaxabiso angentla ngaphezulu banethuba elifanelekileyo lokungeniswa-ngokukodwa ngemisebenzi yexesha eliqhelekileyo, izifundo ezahlukeneyo, kunye nezakhono zokubhala ezinamandla. Isicelo eSaint Elizabeth siquka ifom yesicelo, i-SAT okanye i-ACT izikolo (nokuba iyamkeleka), iincwadi zokucebisa, kunye nesicatshulwa somxholo we-1-2.
Abafundi bayakhuthazwa ukuba batyelele i-campus kwaye baqulunqe intetho-ndlebe kunye nomcebisi we-admissions.
Ikholeji yase-Saint Elizabeth I-Acceptance Rate: 66%
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 366/458
ISAT Math: 350/470
UMTHETHO WOMTHETHO: 17/20
UMSEBENZI IsiNgesi: 14/21
UMTHETHO UMathe: 16/21
Ikholeji yase-Saint Elizabeth Elizabeth:
Efumaneka eMorristown, eNew Jersey, iKholeji yaseSaint Elizabeth iYunivesithi esebenzisana neKatolika, eyasungulwa yiSisters of Charity yaseSaint Elizabeth. Ekuqaleni iikholeji yabasetyhini, isikolo ngoku sinika amathuba abo bobabini. I-CSE inikezela izifundo kwi-grade-graduate, i-graduate, kunye namanqanaba okuqhubekayo emfundo, kunye nee-degrees eziliqela kunye neenkqubo eziza kukhetha kuzo. I-CSE nayo ibamba iProgram ye-Honours-enye ehambisa iindibano zembeko ezihlukeneyo kunye namacandelo aphambili kwezinye izifundo eziphambili kwikholejini.
Kuphela malunga neyure ukusuka eNew York City, i-CSE yindawo enkulu kubafundi abanomdla wokufumana isixeko esikhulu, ngaphandle kokuhlala apho. Ikholeji iqukethe igalari yezobugcisa, isikhungo esigcwele impilo, i-studio ye-drama, kunye nezinye izibonelelo zemfundo nokuzonwabisa. Abafundi banako ukujoyina iindidi ezahlukeneyo zeeklabhu kunye nemibutho, ukusuka kwimfundo, kwiinkcubeko, ukwenza ubugcisa.
Ukuba abafundi banomdla kwiqela elingaba khona, bakhuthazwa ukuba baqale enye. Iikomiti zezemidlalo zaseKholeji - I-Eagles - ngamalungu e-NCAA Division III, kwiNgqungquthela ye-Athletic North.
Ubhaliso lwabonke: 1,200 (i-763 izifundo zakudala)
Ukuphulwa kwesini: 15% Amadoda / 85% amaBhinqa
75% Ixesha elipheleleyo
Isifundo kunye neMali: $ 32,282
Iincwadi: $ 1,300 ( kutheni na? )
Igumbi neBhodi: $ 12,744
Ezinye iindleko: $ 4,899
Iindleko ezipheleleyo: $ 51,225
Ikholeji yase-Saint Elizabeth Elizabeth Financial Aid (2015 - 16):
Izibonelelo: $ 31,079
Imali: $ 6,249
I-Majors Eyaziwayo kakhulu: Abahlengikazi, iiDeetetics, uLawulo lwezoShishino kunye noLawulo, i-Psychology, i-Education, Sociology, i-Biology
Ireyithi yokuQinyezelwa kweNyaka-4: 40%
Izinga lokuQinyezelwa kweNyaka eyi-6: 50%
Ezemidlalo zaBasetyhini: I- Lacrosse, i-Softball, iConcer, iVolleyball, i-Track and field, Izwe eliphambeneyo, iTennis, iBhola yebhola
Ukuba uthanda iKholeji yaseSanta Elizabeth, Unokuthi uthanda ezi zikolo:
University of Seton Hall
Ikholeji yaseNew Jersey
University of Rutgers - Camden
Ikhompuyutha yaseRamapo yaseNew Jersey
I-Worcester Polytechnic Institute (WPI) I-Admissions
I-Nova Southeastern University Admissions
I-Texas ye-A & M kwiYunivesithi yaseGalveston Admissions
ISixeko amagama kwiSpanish
Imbali Yasekhaya yaseMerika yaseNtsapho yaseMelika
AmaSulumane kunye neNtshona: Kutheni kukho ukuxabana?
Iinqanaba ezi-5 eziphambili zoMdlalo wakho webhola lebhola
Ngaba Ukwakhiwa Kwezakhiwo Umdlalo Wemidlalo?
Ukusebenzisa i-verb yase-Spanish 'Encantar' ngeendlela ezahlukeneyo
6 Iibhuloho Uya Kufuna Ukuwela
Iyini Intlawulo ephezulu yokuKhuselwa kweScuba?
ISimboli Sokuthula: Iziqalo kunye nokuziphendukela kwemvelo
Intetho yeHima ngesiJapane
UDavid Berkowitz - Unyana kaSam
Iibhondi zebheyile yeBhayile: Efanelekileyo okanye Engalungile?
Ukuqhafaza ngokuqhelekileyo: Igama leNkcazo